Ithegi: cms | Martech Zone
Iindlela ezi-7 ze-DAM eziLungileyo zinokwandisa ukusebenza kweBrand yakho
NgoLwesihlanu, ngoJuni 10, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJuni 10, 2022 Ed Breault
Xa kuziwa ekugcineni kunye nokulungelelanisa umxholo, kukho izisombululo ezininzi apho-cinga iinkqubo zokulawula umxholo (CMS) okanye iinkonzo zokubamba iifayile (njengeDropbox). I-Digital Asset Management (DAM) isebenza ngokuhambelana nezi ntlobo zezisombululo-kodwa ithatha indlela eyahlukileyo kumxholo. Iinketho ezinje ngeBhokisi, iDropbox, iGoogle Drive, iSharepoint, njl. abazixhasi zonke iinkqubo ezinyukayo eziya ekudaleni, ekuphononongeni nasekulawuleni ezo asethi. NgokweDAM
Zyro: Yakha ngokulula indawo yakho okanye iVenkile ye-Intanethi ngale Platform efikelelekayo
NgoLwesine, Novemba 11, 2021 NgoLwesine, Novemba 11, 2021 Douglas Karr
Ukufumaneka kweeplatifti zokuthengisa ezifikelelekayo ziyaqhubeka zichukumisa, kwaye iinkqubo zokulawula umxholo (CMS) azifani. Ndisebenze kwinani labanini, umthombo ovulekileyo, kunye nokuhlawula amaqonga eCMS kwiminyaka edlulileyo… ezinye ziyamangalisa kwaye ezinye zinzima kakhulu. Ndide ndifunde ukuba zeziphi iinjongo zabathengi, izixhobo, kunye neenkqubo, andenzi ngcebiso malunga nokuba leliphi iqonga emandilisebenzise. Ukuba ulishishini elincinci elingakwaziyo ukulahla amashumi amawaka eedola
Umlingane ohloniphekileyo wanditsalela umnxeba evela kwi-arhente yentengiso ebuza ingcebiso xa wayethetha neshishini elalakha iqonga lalo kwi-Intanethi. Umbutho wawuqulunqwe ngabaphuhlisi abanetalente ephezulu kwaye babengavumi ukusebenzisa inkqubo yolawulo lomxholo (i-CMS)… endaweni yoko baqhuba besebenzisa isisombululo sabo esikhuliswe ekhaya. Yinto endakhe ndayiva ngaphambili… kwaye ndicebisa ngokuchasene nayo. Abaphuhlisi bahlala bekholelwa ukuba i-CMS yindawo yogcino lwedatha
Iqonga leeNkonzo zeMixholo ye-GRM: Ukuzisa ubukrelekrele kwiinkqubo zakho zeshishini
NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2018 Douglas Karr
Amaqonga oLawulo loMxholo woShishino (i-ECM) ayaqhubeka nokuqhubela phambili neminikelo, hayi nje ukuba kungokugcinwa kwamaxwebhu, kodwa eneneni kubonelela ngobukrelekrele kwiinkqubo zeshishini. Iqonga leeNkonzo zeMixholo yeGRM (CSP) lingaphezulu kwenkqubo yolawulo lwamaxwebhu. Sisisombululo apho kunokwenziwa amaxwebhu anokwabiwa kwaye emva koko ukusebenza kungaphuculwa. I-CSP ye-GRM ivumela inkqubo yolawulo lomxholo (i-CMS) ukudibanisa uhlalutyo lwedatha, ukufunda ngomatshini, ukubamba idatha ekrelekrele, kunye nesoftware ye-DMS yokulawula amaxwebhu, ukulandelela uhlobo,